English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Takingaphone call) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 20, 2012 at 9:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်လောကတွင် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားသူများအတွက် ဒီတစ်ပတ်ကစပြီး Trish Stott & Rod Revell ရေးတဲ့ Highly Recommended English for Hotels and Catering industry (New Edition) ကိုအခြေခံပြီးသင်ခန်းစာများရေးသားပေးသွားပါ့မယ်။ စာဖတ်သူများအတွက် self-study လုပ်နိုင်အောင်တတ်နိုင်သ၍ အားထုတ်ထားပါတယ်။
ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်လောက(Hospitality Industry) သည်အပြုံးတွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှု ပေးရသည့်လောက၊ ယဉ်ကျေးဖော်ရွေစွာဝန်ဆောင်မှုပေးရသည့်လောကဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ကသည်လောကကို Gentlemen serve gentlemen business. ဟုဖော်ကျူးကြသည်။
လာရောက်စားသုံးသူကလည်းလူကြီးလူကောင်းများဖြစ်သလို ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများကလည်း လူကြီးလူကောင်းများ၏ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုရှိအောင်ကျိုးစားရသည်။ထို့ကြောင့် ဒီလောကတွင် သုံးနှုန်းပြောဆိုသော စကားတို့သည်လည်း ယဉ်ကျေး၍အဆင့်အတန်း ရှိသော (Formal English) ကိုသုံးကြရပါသည်။ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ တယ်လီဖုန်းလက်ခံစကားပြောခြင်းကို လေ့လာကြပါမည်။
Unit 1.Taking phone Calls (တယ်လီဖုန်းလက်ခံခြင်း)
ပထမဦးစွာ အောက်ပါ dialogue များကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
Receptionist : Good afternoon, New Palace Hotel. May Lee speaking. How Can I help you?
မင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းပါရှင်။ နန်းတောသစ်ဟိုတယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ မေလီလက်ခံဖြေကြားနေပါတယ်။ ဘာကူညီရမလဲရှင်။
Customer: Good afternoon. I'd like to makearoom reservation for tomorrow night please.
Receptionist :Yes sir. Can I have your name please?
Customer: Phillips. Carl Phillips.
Receptionist : Good morning, Sofitel Hotel. Mathew speaking. Can I help you?
Customer : I'd like to speak to Mrs Bader, room at 329, please.
Receptionist : One moment and I'll connect you.
Receptionist : Rio Parthenon, Elizabeth speaking. Can I help you?
Customer : Could I reserveaparking space for tomorrow, please?
Receptionist : Just one moment, who's calling, please?
Customer : Mr. Paolo Folgado.
Receptionist : Thank you Mr Folgado, you're through now.
နမူနာဝါကျတွေမှာ တယ်လီဖုန်းထူးတဲ့အခါ အပိုင်းသုံးပိုင်းရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ ပထမပိုင်းက နှုတ်ဆက်ခြင်း။ ဒုတိယပိုင်းက တယ်လီဖုန်းထူးတဲ့နေရာနဲ့ဌာန ဖြစ်ပြီး တတိယပိုင်းက တယ်လီဖုန်းဆက်သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကိုမေးမြန်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာတွေလိုက်နာရမယ့် ယေဘုယျအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ နေ့ရဲ့အချိန်ကိုလိုက်ပြီး good morning, good afternoon, good evening စသည်ဖြင့်နှုတ်ဆက်ကာ မိမိရဲ့ ဟိုတယ်/စားသောက်ဆိုင် နာမည်နဲ့ဌာနကိုပြောပြရပါတယ်။ ဒီလိုပြောရခြင်းဟာ ဖုန်းဆက်သူအနေနဲ့ သူဆက်လိုတဲ့ဖုန်းဟုတ်မဟုတ်တန်းသိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ဟယ်လို ဟုတစ်ခွန်းထဲတုံးတိပြန်ဖြေတဲ့အခါ ကိုယ်ဆက်တဲ့နေရာဟုတ်မဟုတ် ဧည့်သည်ကပြန်မေးရတာကြုံရင်ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာကြုံကြိုက်လို့ ဖုန်းမည်သံ ဘယ်နှစ်ခါမှာ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်မလဲဆိုတာပြောချင်ပါတယ်။ ဖုန်းသံ နှစ်ကြိမ်မှသုံးကြိမ်အတွင်းဖုန်းကိုင်ဖို့အများစုကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဖုန်းသုံးကြိမ်မည်လို့မှမကိုင်နိုင်တာဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုဂရုမစိုက်ရာရောက်တတ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးမည်ချိန်မှာကိုင်ပြန်လျင်လည်းအလောသုံးဆယ် ဖြစ်လွန်းပြီး ဖုန်းခေါ်သူကအဆင်မသင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖုန်းထူးတဲ့အခါကိုယ့်နာမည်ကိုပြောပြတာ ပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒါဟာ မိမိနဲ့ စားသုံးသူအကြား ရင်းနှီးမှုပထမဆုံးတည်ဆောက် တာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်တာဝန်ယူကြောင်းပြရာလည်းရောက်ပါတယ်။
May Lee speaking. How Can I help you?
I'd like to speak to Mrs Bader.
One moment and I'll connect you.
ရပါပြီရှင်။ (ကိစ္စပြီးပြတ်သည်။ သူလိုချင်သည့် reservation ရပြီ)
Please tell him there'sameeting tomorrow at two o'clock.
ကျေးဇူးပြုပြီး သူ့ကို မနက်ဖန်နေ့လည် ၂ နာရီမှာအစည်းအဝေးရှိတယ်လို့ပြောပေးပါ။
book (v) ကြိုတင်မှာကြားသည်။
makeareservation (v) ကြိုတင်မှာကြားသည်။
the line is busy (ဖုန်း)လိုင်းမအားပါ။
double room - နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပါအခန်း
single room - တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပါအခန်း
twin room - တစ်ယောက်အိပ်ကုတင်နှစ်လုံးပါအခန်း
** အခန်းအခေါ်အဝေါ်တွေဟာ နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးလို့ ယေဘုယျအဖြစ်သာမှတ်ထားပါရန်။
message - အမှာစကား
reserve - (v) ချန်လှပ်ထားသည်။
ဒီနေရာမှာနည်းနည်းထွေပြားနိုင်တာလေးက book နဲ့ reservation တို့ရဲ့အသုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးဟာအဓိပ္ပါယ် တူသော်ညားလည်းဝါကျမှာသုံးပုံကျတော့ကွာခြားပါတယ်။ book ကို ကားရထားလေယဉ်လက်မှတ်တွေ မှာ bookaflight, bookaconference room သုံးတတ်ပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်မှာဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကြိုတင်မှာတာ ကျတော့ bookatable လို့သုံးလေ့မရှိဘဲနဲ့ reserveatable လို့သာသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
I'd like to bookafirst class seat on the train/plane to Paris.
Would you like me to reserve [ save]aspot for you at the conference?
I'd like to book you as our next guest speaker.
I'd like to bookataxi for 6pm to take me to the airport.
ယဉ်ကျေးစွာတောင်းဆိုမှုလုပ်ရာမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်/မ -------- လုပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်လို့ခွင့်တောင်းရာမှာ Can I/Could I...........? မေးခွန်းပုံစံနဲ့ပြောနိုင်ပြီး ကိုယ်က သူ့ကိုကိုယ့်အစားလုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းရာမှာတော့ Can you/Could you ......................? လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ Can I takeamessage? Could you tell him that .....?
အာက်ပါတို့ကို သုံးပြီး ၀ါကျလေးတွေတည်ဆောက်ကြည့်ပါဦး။
ဥပမာ speak to / Mrs Bader
Could I speak to Mrs Bader, please?
1. reserve/aparking space
2. help / you
3. make /aroom reservation
4. have / your name
5. speak to / Miss Jennifer Diaz
6. book /adouble room
I'd like to (I would like to)
ကိုယ်ကတစ်ခုခုလုပ်ချင်၊ လိုချင်လို့ တောင်းဆိုရာမှာသုံးပါတယ်။ အောက်ပါ စကားလုံးတွေကို I'd like to နဲ့ဆက်ပြီး တောင်းဆိုမှုတစ်ချို့လက်တွေ့ချရေးကြည့်ပါဦး။
book make speak to reserve
3.areservation
ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိက အသုံးပြုမယ့်ဆက်သွယ်ရေးနယ်ပယ်ကတော့ ဧည့်ကြိုဝန်ထမ်း(သို့မဟုတ်) ဖုန်းအော်ပရေတာ တစ်ယောက်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမယ့်နယ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ခေါက် သုံးခေါက်လောက် လေ့ကျင့်လိုက်ရင် ဖုန်းလက်ခံထူးခြင်း၊ အမှာစကားမှတ်သားခြင်း၊ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးတောင်းဆိုမှု ပြု လုပ်ခြင်းစတဲ့ ဘာသာစကားလုပ်ငန်းတွေကို အထိုက်အလျောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ကျွမ်းကျင်မှုကတော့ အလုပ်ထဲကျမှ မပြတ်လေ့လာသင်ယူသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှုလောကထဲဝင်မည့်လူသစ်များအတွက် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စကားကိုးလေးနဲ့အားပေးရင်း ဒီသင်ခန်းစာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by chanzonekhun on October 22, 2012 at 12:15
ဒီးသင်္ခန်စာတော့ သိပ်ကောင်းတယ်..ဒါပေမယ့်....ဗွီဒီယိုဖိုင်ရှိရင်လည်းတင်ပေးပါအုံး..(ဖတ်ရင်း နားထောင်ရင်းပေါ)
Permalink Reply by chanzonekhun on October 22, 2012 at 12:25
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on October 22, 2012 at 13:28
Copyright ကြောင့် အသံဖိုင်ကိုတော့ တင်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Permalink Reply by myathazinphyu on October 22, 2012 at 19:24
Permalink Reply by kyawkyaw on October 23, 2012 at 11:14
CAN အစား MAY ကိုပြောင်း သုံးလာ နေကြပါတယ်....သဘောက လုံး ၀ ၀န်ဆောင်မှု ပေးဘို့ ..အဆင်သင့်ဘဲ လို့ ဆိုလိုချင် တဲ့ သဘောလို့ ..သင် ၇ပါတယ်....( ဆ၇ာ လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါ... လက်၇ှိလုပ်ငန်းခွင် မှာ ပြောင်းလဲ တွေ့ ကြုံ လာတာကို ပြန်၇ျယ်တာပါ...)
Permalink Reply by Wint Phyo on October 23, 2012 at 12:26
Permalink Reply by NANT WINT WAH LWIN on October 23, 2012 at 13:11
Copyright ကြောင့် အသံဖိုင်ကိုတော့ တင်ပေးလို့မရရင် ဘယ် Network မှာအသံနားထောင်လို့ရနိုင်မလဲ။
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on October 23, 2012 at 13:16
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီက download လုပ်ထားပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပါဦး။
Permalink Reply by Tainhlwar on October 24, 2012 at 12:49
Permalink Reply by Khine Zin Zin Wai on October 24, 2012 at 13:23
could I request for learning with audio file
Permalink Reply by win win shwe on October 24, 2012 at 17:17
Permalink Reply by Hnin Ei Phyo on October 25, 2012 at 9:56